Momba anay | Huaian Medicom Medical Technology Co., Ltd.
HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD dia naorina tamin'ny 2008. Nandray anjara tamin'ny famokarana sy ny varotra ny vokatra ara-pitsaboana azo ampiasaina mandritra ny 12 taona izahay, manana fikarohana tsy miankina amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny fenitry ny ekipan'ny famokarana sy ny varotra, Ny orinasa miavaka indrindra amin'ny mamokatra catheter Iv, kitapon'ny urine, stopper combi, stopcock telo-lalana, cap Heparin, blades amin'ny fandidiana, lancet amin'ny ra, clamp amin'ny korda, fanjaitra amin'ny fanjaitra amin'ny kofehy, mpampitohy maimaim-poana, fantsom-pitrohana, fantsom-bavony, fantsom-pisakafoanana, fantsom-pifandraisana amin'ny, Amin'ny maha mpanamboatra sy mpanondrana anay, dia matoky ny kalitao sy ny vidiny izahay ary te hanome anao ny serivisy tsara indrindra.
Taorian'ny fandrosoana sy fanavaozana nandritra ny 10 taona mahery, Teknolojia Fitsaboana HUAIAN MEDICOM CO., LTD dia nanjary mpanamboatra sy fitaovana malaza eran-tany any Shina momba ny fanafody ho an'ny erak'izao tontolo izao ho an'i Torkia, Pakistan, Espana, Polonina, Afrika Atsimo, Kenya, Arzantina, Kolombia, Malezia, Alemana, Nizeria, Romania. Ny orinasanay dia manana CE0123 sy ISO13485 Navoakan'ny mpanampy TUV.
Tao anatin'izay folo taona lasa izay, HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD dia namaly tamim-pahavitrihana ny fangatahan'ny tsena famokarana manan-tsaina. Fampidirana ireo loharanon-karena indostrialy, ampiarahana amin'ny haitao fampahalalana, fananganana vahaolana fitantanana atrikasa manan-tsaina. Amin'ny fahatsapana famokarana manan-tsaina amin'ny fotoana iray, mitondra anao ihany koa ny fahafaha-manaonao amin'ny fahafaha-manadihady momba ny famokarana tena izy, ny fanovana amin'ny fotoana tena izy, ny fanaraha-maso ny fotoana tena izy, hampihena tsikelikely ny fidiran'ny olombelona amin'ny fotoana iray, hanatsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny fotoana fandefasana, ary mitondra fanamorana bebe kokoa amin'ny fitantanana.
Ny tanjon'ny orinasan-tsika voalohany, ny mpanjifa aloha, ny serivisy voalohany, ny mpamatsy fampandehanana tsara indrindra no tanjonay. Andao isika hanao ezaka bebe kokoa amin'ny fitsaboana olombelona.
Ny kalitao dia azo antoka avy amin'ny akora hatramin'ny vokatra vita
1. Hizaha toetra ny fitaovan'ny kaomandy rehetra ary tazomy mba hanamarinana.
2. Ny ampahany dia apetraka amin'ny tahiry tsara, ny mpitahiry tahiry dia mandray an-tsoratra ny tahiry ivelany sy ny fiompiana rehetra. Aza adino ny mijery sary mifamatotra.
3. Raiso an-tsoratra ny dingana rehetra sy ny anaran'ny mpiasa, mety hahita olona tompon'andraikitra amin'ny dingana iray izy.
4. Fitsapana ara-pitsaboana alohan'ny fanaterana ny vokatra rehetra. Tatitra, sary ary horonan-tsary dia hatolotra ny mpanjifa.
6. Ekipa teknika matihanina sy nahita fianarana ambony.
Pads amin'ny alikaola, Suction Catheter, Tube fihinanan-jaza, Iv Catheter, Alikaola, Ny haben'ny lelan'ny fandidiana,